Imidlalo ye-VR eyesabekayo ongayijabulela kuma-consoles | Iforamu yeselula
UDaniel Terrasa | 21/11/2021 09:00 | Imidlalo
Abathandi bohlobo olushaqisayo bajabulele ukuzizwisa kwefilimu okuthokozisayo nokusabisayo amashumi eminyaka. Babe sebekwazi ukuqhubeka nokuklabalasa ngenxa yemidlalo yevidiyo. Manje sekuza ukugxuma okusha nokumangazayo: ukwesaba kanye ne-adrenaline kuyiswe kwelinye izinga: okungokoqobo okubonakalayo. Ake sibuyekeze lapha the best horror VR imidlalo.
Izwi lesexwayiso: le midlalo ye-VR ayibafanele abantu abazwela ngokweqile. Cha, lokhu akulona ihaba. Imizwa ukuthi Ubuchwepheshe be-VR Zicacile kangangokuthi sizozithatha kalula. Yingakho imidlalo ye-VR eyesabekayo isabeka kunemidlalo yakudala yesikrini esiyisicaba.
Sekushiwo lokho, sethula ngezansi uhlu lwamageyimu asabisa kakhulu ento engekho ngokoqobo laphaya okwamanje. Njengazo zonke izinhlu, ukukhetha okungaphelele. Kuyoba khona abaphuthelwa izicoco ezingaphezu kwesisodwa kanti abanye bazocabanga ukuthi akubona bonke abakhethiwe (bayisishiyagalombili sebebonke), abangakufanele ukuba lapho. Okungangabazeki ukuthi bonke banekhono elibi lokusinika izikhathi eziningi ezinhle ezimbi. Ingabe unesibindi ngokwanele ukubhekana nazo?
1 Umsebenzi Ongajwayelekile: Umphefumulo Olahlekile
2 Isihambi: Ukuhlukanisa
3 UBlair Witch
4 Abangenayo: Fihla futhi ufune
5 U-Evil 7 ohlala kuyo: i-Biohazard
6 I-Exorcist: iLegion
8 Kuze kube ngukuhlwa: Ukukhishwa kwegazi
Umsebenzi Ongajwayelekile: Umphefumulo Olahlekile
juego ikhuthazwe yisaga sefilimu ye-Paranormal Activity. Sithi "liphefumulelwe" ngoba isakhiwo sikude nesokuqala (lapha sithola izinto zobudemoni nezindaba zezipoki), nakuba sigcina ubuhle nesigqi saso. Uma kukhona, umdlalo uyasigcina isithembiso sawo sokusethusa futhi usifake ephusheni elibi.
I-adventure ye Umsebenzi Ongajwayelekile: Umphefumulo Olahlekile isiyisa endlini evamile endaweni yokuhlala. Konke kwenzeka esikhaleni sehora elilodwa noma amabili lapho kufanele uxazulule izimfihlakalo namaphazili afihlwe emaphasishi nasemagunjini. Ubumnyama buyacisha futhi izingozi zicashe ngemva kwayo yonke iminyango noma ekhoneni elingalindelekile.
Sekukonke, lona umdlalo oqinile we-VR owesabekayo. Inomuzwa onamandla wokwethuka kanye nomoya ominyene othuthukile ngenxa yokusetshenziswa okuhle kakhulu komsindo nokukhanya. Iphuzu layo elibuthakathaka kuphela uhlelo lokulawula olungathuthukiswa. Itholakala ku-PSN ye-PlayStation VR (PSVR) ne-Steam.
Ukwethuka okungokoqobo okubonakalayo ekujuleni kwesikhala
Nakuba kungewona umdlalo ongokoqobo ongokoqobo ngokwawo, i Imodi ye-Alien VR: Ukuzihlukanisa kuhle kakhulu ukuthi ungaphuthelwa ohlwini lwethu. Kuphinde kube yi-horror yakudala futhi ngaphandle kokungabaza ehamba phambili yemidlalo esuselwe ku-franchise yefilimu esabekayo ye-sci-fi. Okungenani kuze kube manje.
Njengoba ungacabanga, izinsimbi zomdlalo zisekelwe ekubalekeleni izidalwa ezesabekayo neziyingozi ze-xenomorphic. Uma uke wawabona amafilimu esaga, ungacabanga ukuthi izithombe zishonaphi. Baleka, ucashe, ubambe umoya ... Umuzwa wokwesaba ungokoqobo ngendlela ephazamisayo.
Buyela ehlathini elesabekayo likaBlair Witch
Impumelelo engalindelekile yefilimu Iphrojekthi kaBlair Witch (1999) isiphindeke ngemuva kweminyaka engama-20 ngenxa yemidlalo yevidiyo engokoqobo. UBlair Witch igeyimu ethusayo yomuntu wokuqala lapho umdlali ecwiliswa ehlathini elesabekayo. Inkampani yakhe okuwukuphela kwayo: inja yethu ethembekile ichashazi, ithoshi kanye nekhamera yevidiyo.
Umdlalo, otholakala manje cishe kuwo wonke ama-consoles, ungesinye sezibonelo ezinhle kakhulu zalokho ochwepheshe bohlobo abakubiza ngakho Ukusinda okwesabekayo. Kubalandeli bemuvi, iwukubuyela ehlathini lase-Burkittsville, Maryland. Kulokhu ngenhloso yokuphenya ngokuduka kwengane.
Isici esisodwa esiphawulekayo sikaBlair Witch ukuthi inikeza umdlali uchungechunge lwezinye iziphetho. Ngale ndlela, ungadlala ngokuphindaphindiwe ngaphandle kokuwela ku-monotony, ulinde okubikezelwe.
Abangenayo: Fihla futhi ufune
Umdlalo othusayo wento engekho ngokoqobo enesitembu sesi-Spanish
Bekukuhle ukufaka lo mdlalo owakhiwe eSpain ohlwini. Abangenayo: Fihla futhi ufune igeyimu eklanywe ngothando oluningi ngemininingwane kanye nesakhiwo esiqinile, into evame ukulibaleka ukuze ivune imiphumela ebonakalayo kanye "nokuthusa".
Indaba ingeyakudala kakhulu ohlotsheni: uhambo lomndeni oluya emzini osezweni ogcina usuyiphupho elibi. Indlu iphakathi nendawo, kude nempucuko. Ngakho, le ndawo eqhelile izovinjezelwa izigebengu ezintathu ezinonya neziyingozi. Kodwa akuwona ubugebengu obujwayelekile, kunempicabadala embi ecashe ngalo lonke lolu dlame.
Umkhathi wendlu ubhekene nokushuba kwesimo esingabekezeleleki ukuthi isimangaliso seqiniso elibonakalayo sisenza sibe nakho enyameni yethu. Umuzwa wokucwiliswa uyamangalisa. Konke lokhu kuyasiza Abangenayo: Fihla futhi ufune inketho engaphezu efiselekayo abathandi horror.
U-Evil 7 ohlala kuyo: i-Biohazard
I-EVil 7 Yesakhamuzi: I-Biohazard isesandleni sayo sodwa ohlwini lwemidlalo engcono kakhulu eyesabekayo ye-VR
Ngokubona kwabaningi, omunye wemidlalo engcono kakhulu ye-VR horror ekhona namuhla. Futhi kungukuthi, ngale kokukhala nokuthusa, U-Evil 7 ohlala kuyo: i-Biohazard isinika okukodwa kokuhlangenwe nakho okunemininingwane futhi okuyimpumelelo ngokweqiniso le-virtual.
Umdlali uthatha izicathulo zika-Ethan Winters, okuthi ukufuna kwakhe uMia, indodakazi yakhe elahlekile, kumyisa endlini ayishiya eduze kwexhaphozi elingcoliswe imisebe. Yiqiniso, lena yindawo yokuhlala yezidalwa ezesabekayo, izidalwa ezingenakwenzeka zamaphupho amabi.
Abalandeli besaga se-Resident Evil bajwayele ukudlala kumuntu wesithathu. Yingakho indlela entsha yale nguqulo imele ukuphambuka okukhulu, ukuguqulwa kwemithetho. Ngaphandle kwalokhu, kokubili ithoni nesigqi kanye nezakhi zokudlala kuyiqiniso kumoya we-franchise. Ngaphezu kwalokho, ingxabano ibuye isetshenzwe kahle kakhulu ukuze konke kufanelane. Ngokuqinisekile, i-Resident Evil 7: isethi ye-Biohazard ingqopha-mlando entsha emidlalweni eyesabekayo yokusinda.
I-Exorcist: I-Legion cishe ingenye yemidlalo engcono kakhulu ye-VR horror
Ngaphandle kokungabaza omunye wemidlalo yento engekho ngokoqobo esabisayo edalwe kuze kube manje. Vuliwe I-Exorcist: iLegion umdlali kufanele athathe indima yomphenyi efuna izimpendulo ngemva kochungechunge lwezenzakalo ezingavamile ezenzeka endlini yesonto enkulu. Umdlalo uqhubeka ngochungechunge lweziqephu ezifinyelela umvuthwandaba ngesikhathi sokugcina esifanele amamuvi asabekayo aseHollywood ahamba phambili.
Esinye sezici eziphawuleka kakhulu ze-Exorcist VR ukuklama kwayo okuhle kakhulu komsindo. Uma sidlala imidlalo, singezwa amazwi abonakala ephuma emakhanda ethu futhi asizungezile ngokusebenzisa umsindo we-3D onamandla wendawo. Ukububula, ukuklolodela okukhulu, neminye imisindo ethusayo kunanela ezingqondweni zethu njengezixwayiso zalokho okuzayo.
Ukuzidela kwe-VR lesi geyimu esikunikeza kona kugcwele izikhathi ezishubile nezigcawu ezijabulisayo. Ubude bayo bufushane, kodwa ulwazi olunikeza lona lukhulu.
Ama-Zombies angempela nadlayo amaningi kunangaphambili ku-The Walking Dead - Saints & Sinners
Ama-Zombies awakwazanga ukushoda ohlwini lwethu lwezinto ezesabisayo eziyintandokazi eqinisweni elibonakalayo lama-consoles. Abafileyo Abahambayo: Abangcwele & Aboni inguquko entsha kule saga egqugquzelwe wuchungechunge lwe-TV oludumile. Uthini ngalo mdlalo? Ihluzo zakhona ziyamangalisa futhi umuzwa wokudlala uyamangaza.
Umdlalo waziwa kakhulu: uhlanganisa ukuzama ukugwema abahamba ngezinyawo ngazo zonke izindleko, kodwa ukulwa nabo uma kunesidingo. Lena i-adventure yokusinda esabekayo njengamanye ambalwa. Ngegazi eliningi kanye namathumbu amaningi. Enguqulweni ye-VR, umuzwa wengozi nokwethuka uyaphindaphindeka, okuphoqa umdlali ukuthi abe sesimweni sokuqapha unomphela.
Kuze kube ngukuhlwa: Ukukhishwa kwegazi
Ingabe ngempela ufuna ukwesaba? Isibindi sokudlala Kuze kuse: Blood Rush
Omunye wemidlalo ethandwa kakhulu ku-PS4, kanye nephupho elibi langempela. Kulabo asebewazi umdlalo enguqulweni evamile, Kuze kube ngukuhlwa: Ukukhishwa kwegazi ayinikezi ngezindaba ezinhle mayelana nesakhiwo nokudlala umdlalo. Nokho, manje enguqulweni ye-VR umuzwa wokuba ngokoqobo uyashaqisa. Akunakwenzeka ukudlala isikhashana ngaphandle kokuthi ukushaya kwenhliziyo kwethu kufike enkulungwaneni.
Umdlalo ogcwele uthatha cishe amahora ama-3 ukuqeda. Ingabe inambitheka kancane? Kwabangaphezu kokukodwa kuzobonakala kukhulu kakhulu, ngoba kunengozi yokuhlaselwa yinhliziyo noma ekugcineni uhlushwa uhlobo oluthile lokungalingani kwengqondo.
Ihaba eceleni, kufanele sigqamise izimfanelo eziningi zeRush of Blood. Umdlalo unekhwalithi yehluzo eyingqayizivele nomsindo ozungezile owenza izinwele zakho zimile. Indaba isekelwe ngokusobala kugeyimu yangempela ngaphandle kokuba i-prequel noma i-sequel yayo. Ingabe uyalokotha ukukuzama?
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Imidlalo » Imidlalo ye-Horror VR ongayithola kuma-consoles
Izilingisi ze-Nintendo Shintsha ze-PC ne-Android